Mongolia International Mugwagwa Wekutakura-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Our Services>International Road Transport>Mongolia International Mugwagwa Wekutakura
Asean International Mugwagwa Wekutakura
Sohologistics inotakura zvinhu zvako muChina wobva waendesa kuMongolia kuburikidza neErlianhot port, Ceke, Ganqi Maodu, Zhuengadabuqi, Azharat, Mandala, Ebudug, Alshan, doko reBagmodu nemarori emidziyo kana mamwe marori akakosha.
Izvo zvakanakira zveSohologistics
1. Kufambisa kwemigwagwa kunotenderwa Ministry of Transport uye kukodzera kwekutakura uye kwakanyanya-kudimbu cargos chekufambisa
2. Yakakura purojekiti yekuita chiitiko uye nyanzvi yepasirose yekufambisa yemigwagwa vatengi
3. Inokwikwidza mitero mitero nekuda kweicho chakakwana kutakura zvinhu
4. GPS yekufambisa yekutarisa nzira yekodhi yako
5. Simudza yako projekiti karavhani pane dzimwe nyika nzira yekufambisa kubva kuChina kuenda kuEurope
6. Mapiyona eChina - Europe yepasipasi nzira yekufambisa
7. Yakazara YeTirori Mitoro (FTL) basa rekufambisa
8. Zvishoma ZveMarori Mitoro (LTL) basa rekufambisa
Ndeapi mhando yezvinhu akakodzera kune dzimwe nyika nzira yekufambisa kuenda kuMongolia?
Zvekutakura zvinhu zvinotevera mamiriro ezvinhu:
A. Kureba kana hupamhi hwenhumbi hunodarika saizi yemudziyo uye inodarika huremu hwechitima pamakiromita mana emitoro inorema.
B.Railway chiteshi uko iyo yekurenda yemidziyo sevhisi isipo.
C. Cargos inoda nguva yakaringana nepo njanji yekufambisa isingakwanise kuvimbisa kutenderera nekuda kwesimba rezvitima zvengara uye nguva yekufamba.
Maitiro ekuitisa tsika kuzivisa, kuendesa kwetsika uye kubvumidzwa kwetsika kwenzira dzekunze dzemigwagwa kuenda kuMongolia?
Matanho acho anowanzoita seanotevera:
A. Mugwagwa wekufambisa kuenda kuMongolia ndiko kuita chirevo chekutumira kunze kwenyika maererano neruzivo rwakaringana rwekunze mota dzekufambisa uye tsika dzemuno mushure mekurodha pamotokari dzekunze muSuperisedised Warehouse.
B. Kufamba kwekutakura nzira kuenda kuMongolia kunoziviswa munyika dziri munzira.
C.International mugwagwa wekutakura kuenda kuMongolia inogona kuziviswa pamuganhu chiteshi chetsika clearance kana panzvimbo yeprojekiti
Ndeipi incoterm inoshandiswa kune epasi rose mugwagwa wekufambisa kuenda kuMongolia?
Kune maviri incoterms DDU (Yakanunurwa Duty Isina kubhadharirwa zita nzvimbo yekuenda), ndiko kuti, kuendesa Duty Isina kubhadharwa kune yakataurwa nzvimbo uye DAP - Yakanunurwa kunzvimbo yekuzvitakura yekuenda.